politika Fiarovana fiainan'olona - Afongo aho
Ny fiainana manokana no tena zava-dehibe ho antsika. Koa, efa lasa Policy izany mba ho anao ny mandre ny fomba manangona, fampiasana, mampita sy manambara sy hampiasa ny vaovao manokana. Ny manaraka mamaritra ny politika fiainana manokana.
• Talohan'ny na tamin 'ny fotoana ny fanangonana ny mombamomba, dia hamantatra ny tanjon'ny izay no efa nanangona vaovao.
• isika hanangona sy fampiasana ny mombamomba fotsiny ny zava-kendren'ny fanatanterahana ireo tanjona voalaza ny antsika sy ho an'ny hafa mifanaraka tanjona, raha tsy mahazo ny fankatoavan'ny ny olona voakasika, na araka ny takian'ny lalàna.
• isika ihany no mitana mombamomba raha mbola ilaina ny fahatanterahan'ny ireo tanjon'ny.
• isika hanangona mombamomba ny ara-dalàna sy ara-drariny ary ny fomba, raha ilaina, ny fahalalana na ny faneken'ny ny olona voakasika.
• angon-drakitra manokana dia tokony ho manan-danja ny tanjona fa izay tokoa ny ampiasaina, ary, ny araka ilaina ho an 'ireo tanjona, tokony ho marina, feno, ary niakatra-to-daty.
• Ho miaro ny mombamomba ny mahay mandanjalanja fiarovana fiarovana manohitra very na halatra, ary koa ny tsy nahazoan-dalana fidirana, famborahana, kopia, fampiasana na ny fanovana.
• Isika dia ho mora azon'ny mpanjifa vaovao momba ny politika sy ny fomba fanao momba ny fitantanana ny vaovao manokana.
Isika ny hanao izay nitarika ny raharaham-barotra araka ireo fitsipika ireo, mba hahazoana antoka fa ny tsiambaratelo ny mombamomba dia voaaro sy foana.